साक्षात्कार प्रक्रियाको दवाबको माध्यमबाट शक्तिलाई सहयोग गर्न तीन सकारात्मक मन्त्रहरू::Jalpa Khabar
साक्षात्कार प्रक्रियाको दवाबको माध्यमबाट शक्तिलाई सहयोग गर्न तीन सकारात्मक मन्त्रहरू
Published on: २७ भाद्र २०७७, शनिबार १०:५७
अन्तर्वार्ता प्रक्रिया एक अद्वितीय रूपमा असहज र सहयोगी गतिविधि हो। हामी भेट्न बाध्य हुन्छौं र प्रदर्शन गर्दछौं …. कुल अपरिचितहरूको संख्या। तपाईंले यो कार्यलाई तीन देखि छ-महिना समय फ्रेममा कायम राख्नुपर्दछ। प्रत्येक अन्तर्वार्ता सत्रको बखत, तपाईंलाई यो दर्शकहरूको लागि आफैलाई बेच्न आवश्यक छ। जब तपाई उत्साहका साथ तपाईको पृष्ठभूमि अनुभव र कौशलको माध्यम बाट दौडनुहुन्छ, तपाईलाई खाली आँखाले भेट्नुहुनेछ र तपाईको आलोचनात्मक निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूको असुविधा सहनुहुनेछ जुन तपाईको क्यारियर, भविष्य र जीवनको मार्ग परिवर्तन गर्न सक्दछ
जब तपाईं आफ्नो काम हराउनुहुन्छ (वा तपाईंले हाल राख्नु भएको एकलाई घृणा गर्नुहुन्छ), तपाईं काम बजारमा घबराउनुहुन्छ, डराउँछ र अलिक निराश। डेटि जस्तै, साथीलाई आकर्षित गर्न यो राम्रो तरिका होईन। तपाइँ एक प्रतिस्पर्धी हानिमा हुनुहुन्छ कि तपाइँलाई काम चाहिने भन्दा उनीहरूलाई आवश्यक छ। यदि तपाईं आफ्नो हालको भूमिकामा खुसी हुनुहुन्छ र अझ राम्रो अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने, खेल मैदान अलि अलि राम्रो गरीएको छ। यस उदाहरणमा पनि, तपाईले चम्किनु पर्ने आवश्यकतालाई चिन्नुहुन्छ ताकि उनीहरूले तपाईको प्रतिस्पर्धी रोजगार खोज्नेहरूको सट्टामा त्यो छनौट गरे जुन उच्च-भुक्तान गर्ने, द्रुत ट्र्याक काम प्राप्त गर्न।
व्यक्तिलाई भेट्ने प्रक्रिया जुन हरेक सानो कथन र बडी भाषाको आलोचना र मुल्यांकन गर्दै हुन्छ तनाव र दबाबले भरिन्छ। तपाईं आफूले भनेका र गर्ने सबै कुरामा आत्म-सचेत हुनुभयो। तपाईं कुनै पनि मिसटेपको आलोचनात्मक हुनुहुन्छ र आफैंलाई पिट्नुहोस्। तपाईको मुटुको दौड, तपाईले पसिना र सास फेर्नुहुन्छ किनकि तपाईले अन्तर्वार्ताकारहरूलाई आकर्षित गर्न आकर्षण, करिश्मा र बौद्धिक प्रतिबन्धको आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ।
निम्नलिखित तीन सजिलो कार्यान्वयन मन्त्राले तपाईंलाई सकारात्मक राख्दछ र तपाईंलाई पाठ्यक्रम रहन र अन्तर्वार्ता प्रक्रियामा सफल हुन अनुमति दिनेछ। एक मन्त्र एक प्रेरणादायक सोच वा मन्त्र हो, प्राय: जेन बौद्ध धर्मको साथ सम्बन्धित, तपाईको मनमा निरन्तर दोहोर्याउँदछ जुन तपाईंलाई प्रेरणा दिन र तपाईको लक्ष्यतिर अगाडि धकेल्न मद्दत गर्दछ।
१. “म कामका लागि सही व्यक्ति हुँ र म यो काम पाउँछु!”
अन्तर्वार्ताको अगाडि तपाईले कम्पनीमा जाँदा अनगिन्ती घण्टा बिताउनु भयो, कामको विवरण २० पटक पढ्नु, अन्तर्वार्ताकारहरू सबैलाई पछाडि धकेल्नु, तपाईको नेटवर्कमा ट्याप गर्दै व्यक्ति र कर्पोरेट संस्कृति सम्बन्धी सकेसम्म धेरै पत्ता लगाउन, साथै मोलहरू खोज्ने को लागी कम्पनीमा कार्य गर्नुहोस् केही भित्री अन्तरदृष्टि प्रदान गर्न। तपाइँको पृष्ठभूमि र कामसँग सम्बन्धित अनुभवहरूको बारेमा सोच्दा, तपाइँ एक कडा, स्मार्ट र विश्वस्त एलिभेटर पिच बनाउनुहुन्छ। तपाईं इमान्दारीपूर्वक विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईंसँग सही अनुभव छ। सही पृष्ठभूमि भएकोमा आत्मविश्वासका साथ सशस्त्र, तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँ कामको लागि सही व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसकारण, यो निष्कर्षमा पुग्न व्यावहारिक र निष्पक्ष छ, “म कामका लागि पूर्ण व्यक्ति हुँ। मसँग सही सीपहरू, पृष्ठभूमि र शिक्षा छ। म यो चुनौतीको लागि तयार छु। म यो स्थितिमा सफल हुन सक्छु। ” तपाईं यसलाई तलको मन्त्रमा भत्काउन सक्नुहुन्छ “म कामका लागि सही व्यक्ति हुँ र म यो काम पाउँछु!”
मलाई थाहा छ तपाई के सोचिरहनु भएको छ अहिले, यस सम्पूर्ण मन्त्र मुम्बो जम्बोको बारेमा अलिकता सन्देह छ। हुनसक्छ तपाईं सहि हुनुहुन्छ, तर केवल मलाई विश्वास गर्नुहोस् र यसलाई प्रयास गर्नुहोस्। यसले तपाईका विचारहरुलाई सकरात्मक दिशामा पुनःप्रोग्राम गर्न मद्दत गर्दछ। जब तपाई भवनमा अन्तर्वार्ताको लागि प्रवेश गर्नुहुन्छ र एड्रेनालाईन बग्न थाल्छ, दोहोर्याउनुहोस्, “म कामको लागि सही व्यक्ति हुँ र मैले यो जागिर पाउने छु!” उस्तै भाषाको विकल्पको लागि स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् जुन तपाईंसँग बढी सहज छ। तपाईं आत्मविश्वासले फुल्नुहुनेछ, आराम गर्नुहोस् र आफैं जोनमा आउनुहुनेछ।
२. “म काम पाउनेछु। यसले लामो लिन सक्दछ, तर यो हुनेछ! म छाड्दिन!”
अन्तर्वार्ता प्रक्रिया सामान्यतया काफी लामो समय लाग्छ। यदि तपाईं एक मध्यम देखि वरिष्ठ स्तर पेशेवर हुनुहुन्छ, यो तीन देखि छ महिना वा अधिक लिन सक्दछ। यस समय सीमा भित्र, कम्पनी वा भर्तीकर्ताहरूबाट कुनै सम्पर्क बिना अवधिहरू हुन्छन्। तपाईं ईमेल गर्नुहुनेछ र तपाईंको भर्तीकर्तालाई कल गर्नुहोस् र तिनीहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्छन्। यदि तिनीहरूले गरे भने, प्रतिक्रिया विरलै छ वा कम मूल्य वा अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ। हाइरिंग म्यानेजर जसले तपाईंलाई उनीहरूको कार्ड दिए र सुझाव दियो कि तपाईंले उनलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंले केही समय पछि सुन्नु भएन, प्रतिक्रिया गरेन।
निरुत्साहित हुनु र महसुस गर्न को लागी सजिलो छ कि तपाईले अन्तर्वार्ताको बम बम गर्नुभयो। तपाईं उदासी, निराशा र डिप्रेसनको फिसलन ढलानमा तल जान सक्नुहुन्छ। तपाईं आफैलाई दोष दिन थाल्नुहुन्छ र कम्पनी र भर्तीकर्ताहरूसँग रिसाउनुहुन्छ। तपाईं अन्तर्वार्ता फेरि दिमागमा दिनुहुन्छ र हरेक सानो शब्द र कार्यको आलोचना गर्नुहुन्छ।
म कार्यवाही साक्षात्कार, क्यारियर र तलब सल्लाह लेख्छु:-ज्याक केल्लि